Gịnị na-bụ Arduino? | Akụrụngwa n'efu
Anyị niile anụla banyere Arduino Project na nsonaazụ ya dị mma maka ụwa akụrụngwa, mana eziokwu bụ na mmadụ ole na ole maara kpọmkwem ihe Arduino bụ na ihe anyị nwere ike iji bọọdụ ahụ ma ọ bụ ihe Arduino Project gụnyere.
Naa na ọ dị mfe ịnweta otu arduino, ma anyị ga-achọ ịma ma nwee ihe karịrị otu bọọdụ Akụrụngwa dị mfe nke nwere ike ijikọ eriri ole na ole na ụfọdụ bọlbụ LED.
2 Kedụ aha gị?
3 Kedu ka o si dị iche na utu Pi?
4 Kedu ụdị efere dị?
5 Kedu ihe anyị kwesịrị iji mee ka ọ rụọ ọrụ?
6 Projectsfọdụ ọrụ anyị nwere ike iji bọọdụ Arduino mee
Ihe oru Arduino bu ngwaike ngwaike nke achọ ihe e kere eke nke a PCB ma ọ bụ Printed Circuit osisi nke na-enyere ọ bụla onye ọrụ ike na ịzụlite ikpeazụ na ọtọ elektrọnik oru ngo. N'ihi ya efere ahụ Arduino abụghị ihe ọzọ karịa bọọdụ PCB nke anyị nwere ike ịmegharị ugboro ole anyị chọrọ na-enweghị akwụ ụgwọ maka ikike ma ọ bụ dabere na ụlọ ọrụ maka ojiji na / ma ọ bụ okike.
Nke a ije (Arduino Project) na-achọ ihe e kere eke nke kpam kpam Free Hardware, ya bụ, ọ bụla onye ọrụ nwere ike iru ha onwe ha mbadamba na-eme ka ha n'ụzọ zuru ezu ọtọ, dịkarịa ala dị ka ọtọ dị ka mbadamba na anyị nwere ike ịzụta.
A mụrụ oru a na 2003 mgbe ọtụtụ ụmụ akwụkwọ si na IVREA Institute nọ na-achọ ihe ọzọ maka mbadamba na BASIC Stamp microcontroller. Efere ndị a na-efu ihe karịrị $ 100 kwa otu, ụgwọ dị elu maka nwata akwụkwọ ọ bụla. Na 2003 ihe izizi izizi nwere nke nwere nweere onwe ya na nke ọha na eze mana onye njikwa ya anaghị egbo onye ọrụ njedebe. Ọ ga - abụ na 2005 mgbe Atmega168 microcontroller bịarutere, microcontroller nke na - abụghị naanị ike bọọdụ kamakwa ọ na - eme ka nrụpụta ya dị ọnụ ala, na - eru taa ndị ụdị bọọdụ Arduino nwere ike ịkwụ $ 5.
Kedụ aha gị?
Ihe oru ngo a nwetara aha ya site na ulo ntaneti nke di nso na IVREA Institute. Dika anyi kwuru, amuru oru a na okpomoku nke ulo akwukwo a nke di na Italy ma di nso na ulo akwukwo a, enwere ulo akwukwo ndi umu akwukwo a na akpo Bar di Re Arduino ma obu Bar del Rey Arduino. Na nsọpụrụ nke ebe a, ndị guzobere ọrụ a, Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino na David Mellis, Ha kpebiri ịkpọ mbadamba wee rụọ ọrụ Arduino.
Site na 2005 ruo taa, Arduino Project anọghị na esemokwu banyere ndị isi na ikike ikike. N'ihi ya, e nwere aha dị iche iche dị ka Genuino, nke bụ akara ngosi nke efere ọrụ ndị rere na United States na Italytali.
Kedu ka o si dị iche na utu Pi?
Ọtụtụ ndị ọrụ na-emegharị bọọdụ Raspberry Pi na bọọdụ Arduino. Ebe ọ bụ na ndị kachasị ọhụụ na ndị bịara abịa na isiokwu ahụ, mbadamba abụọ ahụ nwere ike iyi otu, mana ọ nweghị ihe ga-esi na eziokwu ahụ. Arduino bụ PCB nke nwere microcontroller, mana O nweghi ihe nhazi, enweghi GPU, enweghi ncheta ebulu ma o nweghi uzo mmeputa dika microhdmi, wifi ma obu Bluetooth nke ahụ na-eme ka anyị nwee ike ịtụgharị bọọdụ n'ime minicomputer; ma Arduino ma ọ bụrụ na ọ bụ programmable osisi n'echiche na anyị nwere ike ibu ihe omume na akụrụngwa akụrụngwa ejiri mee ihe omume ahụ: ma ọ bụ ihe dị mfe dịka ịgbanye / gbanyụọ bọlbụ ma ọ bụ ihe dị ike dị ka akụkụ eletrọniki nke ihe nbipute 3D.
E kewara bọọdụ Arduino Project ụzọ abụọ, ụdị nke mbụ ga-abụ bọọdụ dị mfe, bọọdụ PCB microcontroller y ụdị nke abụọ ga-abụ ọta ma ọ bụ ndọtị efere, mbadamba na-agbakwunye ọrụ na bọọdụ Arduino ma dabere na ya maka ọrụ ya.
Otu n'ime ụdị bọọdụ Arduino kachasị ewu ewu bụ:
N'ime otu ụdị Arduino ọta kachasị ewu ewu ma ọ bụ bara uru bụ:
Ọta Arduino Proto
Ọdụ ụgbọ ala Arduino
Efere na ọta bụ ụdị ndị bụ isi. Site na ebe a anyị ga-ahụ ngwa na ngwa ga-enwe ebumnuche nke ime Arduino ka ọ rụpụta ọrụ a kapịrị ọnụ dị ka ọrụ CloneWars nke na -emepụta kits iji gbanwee bọọdụ Arduino MEGA ka ọ bụrụ ihe nbipute 3D siri ike.
Kedu ihe anyị kwesịrị iji mee ka ọ rụọ ọrụ?
Agbanyeghị na ọ nwere ike iyi ihe ezi uche na-adịghị na ya ma ọ bụ dị egwu, maka ọgbakọ Arduino iji rụọ ọrụ nke ọma, anyị ga-achọ ihe abụọ: ike na ngwanrọ.
Nke mbụ, o doro anya, ọ bụrụ na anyị ga-eji akụrụngwa eletrik, anyị ga-achọ ike nke nwere ike ịmịpụta site na isi iyi ma ọ bụ site na ngwa eletriki ọzọ site na ntinye eriri ya.
Anyị ga-enweta ngwanrọ ahụ ekele maka Arduino IDE nke ga - enyere anyị aka ịmepụta, chịkọta ma nwalee mmemme na ọrụ anyị chọrọ ka Arduino board anyị nwee. Arduino IDE bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ anyị ga - agabiga weebụ a. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike iji ụdị IDE na ngwanrọ ọ bụla ọzọ, eziokwu bụ na a na-atụ aro ka ị jiri Arduino IDE kemgbe O nwere ndakọrịta kachasị na ụdị ọrụ niile nke Arduino Project ma nyere anyị aka iziga data koodu niile na enweghị nsogbu ọ bụla..
Projectsfọdụ ọrụ anyị nwere ike iji bọọdụ Arduino mee
Ndị a bụ ụfọdụ ọrụ anyị nwere ike iji efere dị mfe nke ọrụ a rụọ ọrụ (n'agbanyeghị ụdị anyị họọrọ) na nke dịịrị onye ọ bụla.
Ngwa kachasị ama ha niile na nke nyere Arduino oru kachasị ama ama enweghị obi abụọ 3d ngwa nbipute, karịsịa ụdị Prusa i3. Ngwaọrụ mgbanwe a dabere na onye na-eme ihe na ngwa Arduino MEGA 2560.
Mgbe ihe ịga nke ọma nke oru a gasịrị, a mụrụ ọrụ abụọ yiri nke ahụ dabere na Arduino ma metụtara 3D mbipụta. Nke mbụ n’ime ha ga-abụ ihe nyocha 3D iji efere Arduino UNO na nke abụọ bụ oru ngo nke na-eji Arduino osisi iji megharịa ma mepụta filament ọhụrụ maka ndị na-ebi akwụkwọ 3D.
Owa IoT bụ mpaghara ọzọ ma ọ bụ ebe Arduino nwere ọtụtụ ọrụ. Arduino Yún bụ ihe atụ kachasị maka ọrụ ndị a na-eme mkpọchi elektrọnik, sensọ mkpịsị aka, ihe mmetụta gburugburu ebe obibi, wdg ... Na nkenke, akwa dị n'etiti Internetntanetị na eletrọniki.
Nke a bụ obere nchịkọta nke Arduino Project na mbadamba Arduino. A obere nchịkọta na-enye anyị echiche nke ihe efere ndị a, ma dị ka anyị kwuru, mmalite ha laghachiri na 2003 ma kemgbe ahụ, efere ndị a Arduino na-eto ọ bụghị naanị na arụmọrụ ma ọ bụ ike kamakwa na ọrụ, akụkọ, esemokwu na eziokwu na-adịghị agwụ agwụ na-eme Arduino nnukwu nhọrọ maka ọrụ ngwanrọ n'efu ma ọ bụ naanị maka ọrụ ọ bụla metụtara Elektrọnik.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Gịnị na-bụ Arduino?